လူမှုရေးကြော်ငြာခန့်မှန်းအသုံးစရိတ် Martech Zone
သောကြာနေ့, မေလ 3, 2013 ကြာသပတေးနေ့, မေလ 2, 2013 Douglas Karr
လူမှုမီဒီယာကြော်ငြာဝင်ငွေတိုးပွားလာရန်မျှော်လင့်ထား ယခုနှစ် 11 အားဖြင့် $ 2017 ဘီလီယံဒေါ်လာ။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တစ်ခုတည်းကပင်၎င်း၏ဒေါ်လာဘီလီယံ ၁၀၀၀ နီးပါးရနိုင်သည်ဟုမျှော်လင့်ရသည် 2013 ခုနှစ်တွင်မိုဘိုင်းကြော်ငြာဝင်ငွေ.
များစွာသောဆိုရှယ်မီဒီယာလုပ်ငန်းခွင်ခေါင်းဆောင်များကဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအာရုံစိုက်ရန်စိတ်ကူးကိုကဲ့ရဲ့ကြသည်။ စောစောစီးစီးမွေးစားသူများဖြစ်ပြီးသိသိသာသာလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်သောသူများအတွက်ပြောရန်လွယ်ကူသည်။ ၎င်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကြုံတွေ့ရသည့်အခြေအနေနှင့်မတူပါ။ ၎င်းတို့သည်လူမှုမီဒီယာတွင်အောက်ပါအချက်များကိုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်။ ထိုတိုးတက်မှုနှင့်ဖမ်းယူမှုအတွက်အရှိန်မြှင့်ရန် - ကြော်ငြာအတွက်ပေးဆပ်ခြင်းသည်ခိုင်မာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်သည်။
လူမှုကြော်ငြာများကိုသင်ပျိုးထောင်ရန်သင်ငွေနှင့်အချိန်များစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသောပရိသတ်ကိုရောက်ရှိသည်။ ဘယ်ပရိသတ်တွေကအများဆုံးပါ ၀ င်နေတယ်ဆိုတာကိုသင်တွေ့နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ကြော်ငြာတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန် ၀ ယ်ယူနေပြီးစစ်မှန်တဲ့ဒေတာကိုအခြေခံပြီးပရိတ်သတ်အခြေစိုက်စခန်းကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ Salesforce စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတိမ်တိုက် VP Peter Goodman ပါ
အကယ်၍ infographic သည်လုံလောက်မှုမရှိပါက Salesforce ၏ eBook ကို download လုပ်ပါ။ Social Media ကြော်ငြာများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိထားသင့်သမျှ.
Tags: ကြော်ငြာအသုံးစရိတ်ခန့်မှန်းချက်Facebook ကြော်ငြာအသုံးစရိတ်Facebook မိုဘိုင်းFacebook ကိုမိုဘိုင်းကြော်ငြာအသုံးစရိတ်google ပေါင်းကြော်ငြာအသုံးစရိတ်ကြော်ငြာကြော်ငြာအသုံးစရိတ်ရောင်းသူsalesforce စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမိုcloud်းတိမ်သည်လူမှုရေးကြော်ငြာအသုံးစရိတ်twitter ကြော်ငြာအသုံးစရိတ်